Raysul Wasaare Cabdiweli Sheekh oo maanta gaaray magaalada Marko – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 7 May 2014 4 April 2019
Marko – Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed Maxamed iyo xubno ka tirsan wasiirada iyo saraakiil ciidan ayaa gaaray magaalada Marko ee xarunta gobalka Shabeelaha Hoose.
Wafdiga Raysulwasaaraha ayaa diyaarad Helicopter ah ku tagay magaalada Marko, iyadoo aan horay loo sii shaacin safarka Ra’iisul Wasaarahu ku tegay halkaas.
Guddoomiyaha gobalka Shabeelaha Hoose, C/qaadir Maxamed Nuur “Siidii”, guddoomiyaha degmada Marko iyo wasiir kuxigeenka gaashaandhiga iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo halkaas horay ugu sugnaa.
Waxaa si weyn loo adkeeyey magaalada Marko, waxaana wadooyinka dhan taagan ciidamo isugu jira kuwa milateriga iyo ciidanka Amisom oo ammaanka sugaya.
Raysulwasaaraha ayaa la geeyey xarrunta loogu talagalay, waxaana la filayaa inuu halkaas kualn kula yeesho mas’uuliyiinta iyo waxgaradka gobolka Shabeellaha Hoose.
Madaxweyne Xasan oo dalka kusoo laabtay xilli laga dalbaday iscasilaad